Archive du 10-sept-2021
Fitondrana manafintohin'olona Fihetsiketsehana 1 kaontenera , asa vita 1 kapoaka
Ity Fitondrana ity no “Scandales” sy nanao toe-javatra nanafintohina olona betsaka indrindra tao anatin’ny 60 taona,
Mahery tsy maody…
Mifamahofaho eto amin’ny tany sy ny fanjakana hatrany ny toe-javatra mamohitra. Ireny no zary lasa manamarika ny fiainam-pirenena, manakona ny zava-misy.
Lehiben’ny fiarovan’ny Ambasady Sinoa Nitsidika am-panajana ny minisitry ny filaminam-bahoaka
Omaly 9 septambra 2021 dia tonga nitsidika ny Minisitry ny filaminam-bahoaka, ny Contrôleur Général de Police, Randrianarison Fanomezantsoa,
Nisandoka ho mampitombo vola Nahazoany 300.000 Ar ilay ramatoa
Lehilahy iray 26 taona no saron’ny polisy miasa ao amin'ny kaomisarian’ny Fenerive-Est, DRSP Analanjirofo ny faran’ny herinandro teo tao Morondrano Fenerive Est rehefa nisoloky.
Paul Rabary “Efa misy olona fahatelo matanjaka any”
Miaina toe-draharaha mialoha fifidianana isika ankehitriny, hoy ny mpahaifiarahamonina politika, Paul Rabary. Samy miatrika ny fifidianana 2023 ny rehetra, hoy izy.
Olana amin’ny fifandraisan-davitra Mandeha ny fanadihadiana parlemantera
Nampahafantarina tetsy amin’ny antenimieram-pirenena omaly ny fehin-kevitra faharoa ny 31 mey 2021 fa mijoro eo anivon’ny antenimieram-pirenena ny kaomisionim-panadihadiana parlemantera momba ny
Vadina minisitra nandrahona jeneraly Tsy faly ny mpitandro filaminana
Niteraka resabe ary niely tamin’ny tambazotran-tserasera ny horonan-peo voalaza fa feon’ny vadina minisitra iray nandrahona jeneraly.
Operation pick-pocket Lehilahy 2 no tratra teny Andohatapenaka
Lehilahy miisa 02 no saron’ny Polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny 67ha andro vitsy lasa izay noho ny resaka fanendahana sy sinto-mahery ary harom-paosy.
Fanatanjahantena Afrikanina Nihaona tany Paris i Siteny sy Motsepe Filohan’ny CAF
Nihaona tany Paris Renivohitra Frantsay ny Filohan'ny UAJ (Union Africaine de Judo) Atoa Siteny Andrianasoloniaiko izay teratany Malagasy sy Atoa Patrice Motsepe,
Fahasalamana ara-pananahana Namoaka boky ny Dokotera Rakotobe Andriamaro
Navoaka ho fanta-bahoaka omaly Notanterahina omaly tetsy Anosy ny fampahafantarana ny boky "Guide de Gynécologie - Obstétrique pour le Médecin Généraliste"
Famokarana sarimihetsika Malagasy Mila mandany 40 tapitrisa ariary fara fahakeliny
Efa ela no niady tamin’ny hosoka na piraty izahay mpamokatra sarimihetsika Malagasy, hoy ny mpamokatra, Sitraka Raharison.
Tsy noraharahian'ny governemanta Miady irery i Lalatiana Rakotondrazafy
Resabe efa efatra izao ny momba ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy mivady sy ny Mpanakanto malaza Mr Sayda.
Mpilalao sarimihetsika sy ben’ny tanàna Hanao ady baolina kitra ao Imerintsiatosika
Mikarakara lalao baolina kitra goavana ny alahady izao ny avy eo anivon’ny trano mpamokatra sarimihetsika Outline movie.
Tsy mifampikoso-maso Nitory gazety i Lalatiana mivady
Nametraka fitoriana ny gazety an-tsoratra La Gazette de la Grande Ile ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy sy Atoa Andry Andriatongarivo vadiny manoloana
Orinasa mpitsabo malagasy FITRAMA Nahazo ivon-toeram-pitsaboana manara-penitra
Nahazo ivon-toeram-pitsaboana manara-penitra ny orinasa mpitsabo Malagasy FITRAMA etsy amin’ny 67 ha.